नुनमा प्लास्टिक !- विचार - कान्तिपुर समाचार
नुनमा प्लास्टिक !
आश्विन १४, २०७५ कुसुम बास्ताेला
काठमाडौँ — हामी नुन स्वादका लागि मात्र खाँदैनौं । यो आयोडिन र सोडियमको भरपर्दो स्रोत हो । मानिसले नुनलाई हजारौं वर्षदेखि खानामा समावेश गर्दै आएका छन् । मानव स्वास्थ्यका लागि भनेर हामीले खाने नुन आफैं भने कति स्वस्थ छ ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विभिन्न अध्ययनले नुनमा हानिकारक प्लास्टिकका रासायनिक तत्त्व फेला पारेका छन् ।
हामीले प्रयोग गरेका प्लास्टिकजन्य पदार्थ बोतल, रबर, कस्मेटिक सामग्री आकासे पानीसँगै खोलामा मिसिन्छन् । ती खोला हुँदै समुद्रमा पुग्छन् । नुन समुद्रकै पानीबाट निकालिन्छ । समुद्रमा प्लास्टिक थुप्रिने क्रम बढ्दै जाँदा नुनमा पनि तिनका मसिना टुक्रा मिसिएका हुन् ।
तीन वर्षअघि चीनमा गरिएको अनुसन्धानमा पहिलोपटक नुनमा प्लास्टिक देखिएको थियो । त्यसपछिका अन्य अनुसन्धानले त्यसलाई पुष्टि गरेका छन् । समुद्रमा पुगेका प्लास्टिकका टुक्रा कैयौं वर्षसम्म रहन्छन् । सामान्यतया प्लास्टिकजन्य वस्तु कुहिन कम्तीमा ४ सय ५० वर्ष लाग्छ । कतिपय बोतल एक हजार वर्षमा सड्छ ।
जापानको निहोन विश्वविद्यालयका जापानी एवं चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताले सन् २००९ मा गरेको अनुसन्धानअनुसार अल्ट्रा भायोलेट (यूभी) किरणको प्रतिक्रियामा आएपछि प्लास्टिकका मिश्रित तत्त्व छुट्टिन्छन् । त्यसैले प्लास्टिक एक वर्षभन्दा कम समयमा कुहिन्छन् । यस क्रममा ‘विसफेनोल ए’ जस्ता मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पदार्थ निस्किन्छन् । घाममा यूभी किरण हुन्छ ।
प्लास्टिक कुहिँदा निस्किएका तत्त्व नुनमा मिसिन सक्छन् । निहोन विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्री कासुहिको साइडो नेतृत्वको टोलीले गरेको अनुसन्धानमा प्रशान्त महासागरबाट लिइएको नुनिलो पानीमा १५० पीपीएम प्लास्टिक भेटिएको थियो । यस्तै अमेरिकामा खाद्य नुनमा विसफेनोल ए, स्टाइरोफोम, स्टाइरिनजस्ता रसायन भेटिएका छन् ।
यी मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन् । स्टाइरिन क्यान्सरका थुप्रै कारकमध्ये एक हो । समुद्रको नुनिलो पानीबाट तयार पारिएको नुनलाई आयोडिनसँग प्रतिक्रियामा ल्याएर आयोडिनयुक्त नुन बजारमा बिक्री गरिन्छ । हामी नेपालीले खाने नुन भारत, चीनबाट आयात गरिन्छ । ती नुन समुद्रबाट प्रशोधित भएर यहाँ आइपुग्छन् ।
हानिकारक रसायन मिश्रित नुन सेवन नगरौं भने शरीरमा सोडियम र आयोडिनको कमी हुन्छ । आयोडिनको कमीले गलगाँड निस्किन्छ । गलगाँडको समस्या हटाउनै नुनमा आयोडिन मिसाउन थालिएको हो । अहिले नब्बे प्रतिशत नेपालीले आफ्नो खानामा पर्याप्त मात्रामा आयोडिनयुक्त नुन सेवन गर्छन् । सोडियम शरीरका लागि अत्यावश्यक छ । सोडियमले स्नायुको आवेगलाई प्रसारित गर्छ, मांसपेशीका फाइबरलाई सङ्कुचन र आराम गर्नलाई मद्दत गर्छ । नुन हाम्रा लागि लतजस्तै बनेको छ । बरु सुन नलगाई जीवन चल्छ, तर नुन नखाई जीवनयापन गर्न गाह्रो पर्छ ।
मानव स्वास्थयमा प्लास्टिकजन्य वस्तुको सेवनपछि मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे अनुसन्धान हुन बाँकी छ तर यति भन्न सकिन्छ, अहिले शरीरमा प्लास्टिकजन्य रसायन प्रवेश नभएको कुनै व्यक्ति छैन । प्लास्टिकका सामग्री डढाउँदा निस्किने धूवाँमा हुने स्टाइरिनले आँखालाई असर गर्छ । लामो समयसम्म यस रसायनको नजिक रहँदा टाउको दुख्ने, खानामा अरुचि हुने, कमजोरी महसुस हुने, तन्त्रिका विकार गराउने हुन्छ । यसलाई छाला एवं फोक्सोले निकै छिटो सोस्छ । हामीले नुनमार्फत यस्ता हानिकारक रसायन खाँदा स्वास्थ्यमा पक्कै असर पर्ला ।
हामी रक्तचाप कम हुँदा नुनपानी पिउँछौं, घाँटी दुख्दा नुनपानीले सफा गर्छौं । यसो गर्दा हानिकारक रसायन पनि शरीरमा छिर्ने रहेछ । प्रयोग गरेपछि फोहोर भनी मिल्काइएका प्लास्टिकका बोतल झोला, माटो, खोला हुँदै समुद्रमा पुग्छन् । ती नुनसँगै हाम्रै भान्छामा आइपुग्दा रहेछन् । मानवले आविष्कार गरेको प्लास्टिकले मानव स्वास्थ्यलाई बिगार्दो रहेछ ।
सन् १९०७ मा लियो बइकलेन्डले न्युयोर्कमा प्लास्टिक आविष्कार गरेका हुन् । यसको प्रयोग अहिले अत्यधिक छ । हरेक वर्ष असी लाख टन प्लास्टिक समुद्रमा मिसिने अनुमान छ । यो क्रमले निरन्तरता पाउने हो भने प्लास्टिकजन्य रसायनको एकाग्रता नुनमा बढ्दै जान्छ । यसले मानिसमा नयाँ–नयाँ रोग निम्तिने जोखिम पनि बढ्नेछ ।
हामीले प्लास्टिकजन्य फोहोर जतिसक्दो कम मात्रामा समुद्रमा पुगोस् भनेर उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ । प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रयोग निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । घरबाट निस्किएका प्लास्टिकजन्य पदार्थ पुन: प्रयोग वा पुन: नवीकरणमा जोड दिनुपर्छ । मानव स्वास्थ्यका लागि सेवन गरिने नुनलाई विष बन्न नदिन बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।
प्रकाशित : आश्विन १४, २०७५ ०७:५५
कर्णाली नदीमा एक पुरुषको शव भेटियो
आश्विन १४, २०७५ गणेश चौधरी
टीकापुर — टीकापुर नगरपालिका–८ सत्तीस्थित कर्णाली नदीको पुल मुनि शनिबार एक पुरुषको शव भेटिएको छ । पुलको पिलरमा अड्किएको पानीमा तैरिरहेको शव भेटिएको हो । उनको पहिचान खुल्न सकेको छैन ।
पुल मुनि शव रहेको स्थानीयले खबर गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालयको टोली गएको थियो । कालो टी सर्ट र निलो रङको हाप पाइन्ट लगाएको र करिब ५ फिट ६ इन्च अग्लो रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
एक साइडमा शिवको र अर्को साइडमा हनुमानको फोटो भएको लकेट लगाएको पुरुष करिब ४० वर्षको भएको प्रहरीको अनुमान छ । शवलाई टीकापुर अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन १४, २०७५ ०७:४६